जुम्लाका घाइते प्रहरीलाई पनि काठमाडौं ल्याइयो - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०५:१०
काठमाडाैं । जुम्लामा प्रहरीकै गोली लागेर घाइते भएका प्रहरी जवानलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । उनलाई थप उपचारका लागि शुक्रबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको हो ।
बिहीबार जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. गोविन्द केसी समर्थकले गरेको नाराबाजीमा प्रहरी हस्तक्षेप गर्दै गोली चलाएको थियो । गोली लागेर घाइते भएका प्रहरी जवान कमल आचार्यलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको हो ।
उनको मनमोहन कार्डियोथोरासिकमा उपचार हुँदैछ । डा. भगवान कोइरालासहितको चिकित्सकको टोलीले उनको उपचार गर्दैछ । जुम्लाबाट नेपालगन्ज ल्याइएर आचार्यले बिहीबार राति नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा राखिएको थियो । प्रहरीले आन्दोलनकारीले सिसा र किला प्रहार गर्दा छातीमा लागेर घाइते भएको बताए पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उनको बायाँ छातीमा गोली लागेको छ ।
उनको बायाँ छातीमा लागेको गोलीको असर मुटु नजिकैसम्म पुगेको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले जनाए । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर २० दिनदेखि जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशनमा बसेका डा। गोविन्द केसीलाई प्रहरीले जबरजस्ती काठमाडौं ल्याउन लागेपछि स्थानीय, विद्यार्थी र केसी समर्थकले नारावाजी गरेका थिए ।